Dib u eeg VR BOX 2.0, muraayadaha ugu macquulsan dalxiiska ugu raqiisan | Androidsis
Mid ka mid ah waxyaabaha sida xun u garaacaya sannadkan ayaa ah, shaki la’aan, muraayadaha indhaha ee dhabta ah ee noo oggolaanaya inaan si buuxda ugu quusano adduunka ciyaaraha fiidiyowga ama xitaa shineemo saddex-cabbir leh, muraayadaha sida kuwa aan kugu tusno. waa dhameystiran yahay Dib u eegida VR BOX 2.0, ciddiyaha Muraayadaha Qiimaha Jaban qiimo aad u jaban, aad u hooseeya taas Waxaad si dhib yar awoodi doontaa inaad ku hesho wax ka yar 16 Euro taas oo aan fursad u heli doonno inaan ku tijaabino waayo-aragnimada xaqiiqda dalwaddii iyadoo leh dammaanad-qaadyo qanacsan oo sarreeya iyo in ka badan tayo hufan oo aan waxba ka hinaasi karin muraayadaha kale ee qaabka xitaa qiimahoodu afar laabmayo.
Marka hadaad rabto inaad ogaato wax walba oo ay noo fidiyaan VR BOX 2.0, taas oo aniga ah mid ka mid ah muraayadaha xaqiiqda dalwaddii ugu wanaagsanaa inta u dhexeysa qiimaheeda kala duwan, shaki la'aan maahan inaad seegto qoraalkan fiidiyowga ah tan iyo markii aan ku tusi doono muraayadahaan dhabta ah ee muuqaalka ah si faahfaahsan iyo sidoo kale inaan ka faalloodo dareenkayga dhabta ah ee sheyga. Marka maxaad sugeysaa inaad gujiso «Sii wad akhrinta qoraalkan».
Waxa ugu horreeya ee ay tahay in la xuso waa tayada sare ee wax soo saarka iyo soo bandhigista xarrago leh ee ay ku timaaddo baakaddeeda ugu dambeysa. Taasi waa sida aad tahay VR BOX 2.0 Waxay noogu yimaadaan wax kasta oo aan u baahanahay si aan ugu bilawno tayada xaqiiqadan dalwaddii. Waxayna umuuqataa wax cajiib ah in kaliya 16 euro aan ka heli karno xirmada dhameystiran ee VR BOX 2.0 muraayadaha dhabta ah ee muuqaalka ah ee soo socda lagu daro:
VR BOX 2.0 muraayadaha xaqiiqda dalwaddii ah
Maamulaha Bluetooth - Marka laga hadlayo ka mid ahaanshaha qalabka fog ee 'Bluetooth', waxaan leenahay wax badan oo aan ka faallono wax yar oo ka sii hooseeya.
Tilmaamaha bilowga degdegga ah.
3 Baro loogu talagalay qabashada saxda ah ee casriga ah keydinta badhamada boosteejada.
2 Xirmo tirtiraha qoyan ee gaarka ah si loo nadiifiyo muraayadaha indhaha muraayadaha indhaha iyo sidoo kale shaashadda taleefanka casriga ah.
1 Mashiinka ka-hortagga boodhka iyo xoqidda nadiifinta muraayadaha indhaha iyo shaashadda taleefanka casriga ah.
2 3M istiikarada lifaaqa.
Muraayad dabacsan si looga ilaaliyo muraayadaha indhaha boodhka iyo inay sidoo kale mas'uul ka yihiin kala sifeynta laydhka buluuga ah si daalka muuqaalka ah marka loo isticmaalayo muraayadahaan xaqiiqda dalwaddii ah uu aad uga yar yahay.
1 Naqshadeynta iyo qalabka dhismaha ee VR BOX 2.0 muraayadaha dhabta ah ee muuqaalka ah
2 Xakameeyaha fog adigoo adeegsanaya Bluetooth-ka VR BOX 2.0
3 Telefonkeyga casriga ah miyay la jaan qaadi doonaan VR BOX 2.0?
4 Fikradaha Tifatiraha:
4.3 Halkan guji si aad uga iibsato Amazon qiimaha ugu fiican
Naqshadeynta iyo qalabka dhismaha ee VR BOX 2.0 muraayadaha dhabta ah ee muuqaalka ah
ka VR BOX 2.0 Waxay yihiin muraayadaha xaqiiqda dhabta ah ee dhinaca naqshadeynta dibedda ah ay si fiican ugu dhaafi karaan muraayadaha xaqiiqda dhabta ah ee Samsung ee VR Gear ama Gear VR, oo leh xariiqyo iyo dhammeystir tayo sare leh oo naqshadeynta loogu talagalay raaxada ugu badan ee la adeegsanayo.
VR BOX 2.0 waxay ka samaysan yihiin caag, polycarbonate tayo sare leh oo leh meelaha jilicsan ee qaybta tooska wajigeena u taabanaya si looga fogaado isqabqabsi toos ah oo ka dhan ah balaastigga sidaasna looga fogaado xagashada ama astaamaha isticmaalka aaladda, taas oo na siineysa dareemo raaxo leh oo aan ku ilaawi karno inaan iyaga xiranahay.
Dhejiyeyaasheeda si ay u xirxiraan aaladda madaxa ayaa leh saddex qodob barroosinka. labada dhinac ee madaxa iyo kor uun, Saddexda waa la isku hagaajin karaa qiyaas ahaan si dareenka raaxada, amniga iyo hagaajintu u qumman yahay waxaanan si buuxda ugu quusin karnaa ciyaaraha ama filimada annaga oo aan haysan muraayadaha mar walba ama aan leenahay dareen ah in daqiiqad kasta ay tagi doonaan. siidaynta.
Sidoo kale, kontoroolka fog ama Bluetoot kantaroolaha fogh wuxuu leeyahay naqshad soo jiidasho leh joystick isku dhafan iyo badhamno fara badan, in kastoo sida aan waxoogaa hoose kuugu sheegi doono qayb gaar ah, labadaba qalabka dhismaha iyo shaqadooda wax badan ayey u reebaan.
Xakameeyaha fog adigoo adeegsanaya Bluetooth-ka VR BOX 2.0
Shaki kuma jiro muuqaalka ugu xun ee muraayadaha dhabta ah ee qiimaha muraayadaha, iyo waa in qalabka koontaroolka fog laga hago ama kantaroolaha Bluetooth-ka uu yahay joystick la yimaada VR BOX 2.0, marka laga reebo in lagu dhisay qalab caag ah oo aad u tayo hooseeya, sidaa darteedna daboolka dambe ee baytariyada oo kaliya la furayo dhowr Mar si fiican uma xirmi doono, inta badan ciyaaraha VR-ka ee aan iskudayay my terminal-ka Android, waxay kaliya u adeegi doontaa sidii xakameyn mug fudud iyo in gebi ahaanba laga baxo ciyaaraha qaar.
Marka waxaan dhihi karaa taas joystick-ka la socda VR BOX 2.0 gabi ahaanba waa wax aan faa'iido lahayn tan iyo markii aysan u qalmin wax aan ka rajeyneyno mashiinka ciyaarta fog.
Telefonkeyga casriga ah miyay la jaan qaadi doonaan VR BOX 2.0?
ka VR BOX 2.0 waxay la jaan qaadayaan taleefannada casriga ee Android oo u dhexeeya 4,5 ″ ilaa 5,7 ″, inkasta oo aad sidoo kale u baahan doonto inaad buuxiso shuruudo farsamo qaarkood sida leeyihiin dhisme gyro iyo xawaare dheereeya si loo ogaado loona turjumo dhaqdhaqaaqa madaxa.
Marka lagu daro tan iyo inkasta oo aysan ahayn shuruud lagama maarmaan ah, haddii aad rabto inaad ku raaxaysato khibrad wanaagsan oo wanaagsan iyo tayada ciyaaraha iyo filimada, sidoo kale waxaad u baahan doontaa taleefan casri ah oo leh shaashad leh xallinta ugu yar ee FullHD ama ka sareysa.
Muraayadaha tayada leh
Dhammaad wanaagsan iyo qalabka dhismaha
saddex dhibic isku xidha
Waxay ku daraan muraayad qaboojiyaha ah oo miiraysa nalka buluuga ah
Maamulaha Bluetooth aan la isticmaali karin
Halkan guji si aad uga iibsato Amazon qiimaha ugu fiican
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Reviews » Dib u eeg VR BOX 2.0, waxaan tijaabinay muraayadaha ugu Fiican Qiimaha hoose ee Virtual
Ma iibsan kartaa kontorool kale oo ku habboon muraayadaha indhaha?
Ku jawaab Rebeca
Xakameynta waxaa loo isticmaali karaa ciyaar ahaan, ma ahan kaliya mugga.
Mar haddii ay la jaanqaadayso taleefannadeenna casriga ah, adigoo riixaya oo haya badhamada @ + C ka hago ee muddo yar ilbiriqsiyo ah, waxay gelaysaa habka GAME.
Waan ogaan doonnaa tan sababtoo ah waxaan ku dhex wareegi karnaa astaamaha ku yaal desktop-ka casriga ah adoo adeegsanaya usha koontaroolka
Maskaxda ku hay in dhammaan ciyaaraha VR aysan taageerin adeegsiga aaladda kontoroolka fog. Laakiin si loo tijaabiyo waxaan kugula talinayaa ciyaarta Fantasy VR.
Sababtoo ah kuwa kale ee la iibiyo waxay la yimaadaan kontorool madow oo leh badhanno yar. Waa maxay farqiga u dhexeeya, iyagu ma tayo hooseeyaan?
Jawaab Faryd ortiz
Javier Alvarez muuqaalka booska dijo
iibso VOS badan waxay la mid tahay tusaalaha lagu soo bandhigay qoraalkan, oo leh farqiga ugu yar ee ay ku leedahay god dhinaca hore ah, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado waxa loogu talagalay iyo waxa loogu talagalay ...
Jawaab Javier Alvarez
Wadatashi degdeg ah ayaa la jaan qaada taleefanka gacanta ee Huawei P10